मानवता हराएको क्रुर समाज
काठमाडौँ । चुपचाप सहनु भनेको आफै माथिको अन्याय हो । के एउटा समाज सधै चुपचाप अन्याय सहेर बस्न सक्छ ? एउटा सिङ्गो समाज एउटी अबोध निरिह महिलालाई ताली पिटी पिटीकन ६ घण्टासम्म कुट्न सक्छ उफ ! मानवता कता हरायो ?
के मानवसमाजको पहिचान क्रुरता हो ? कहिलेसम्म हिंसा सहने महिला भएकै आधारमा, गरिब भएकै आधारमा ? राज्य खै तेरो कर्तव्य ? कता हरायो उपस्थिति ? गाँउ गाँउमा सिंहदरबार पुग्यो भन्दै गर्दा जनताले गाँउ गाँउमा सिंहहरु पसेको अनुभव गर्दछन्, असुरक्षित महशुस गर्दछन् भने यसले आफ्नो औचित्य माथि प्रश्नचिन्ह खडा गराउँछ ?
के बोक्सी जस्तो रुढिवादी सोचलाई अपराधको विषय बनाएर समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सकिन्छ ? किन पलाएन मान्छेमा मानवता ? कसरी जन्मियो यो कुरीति ? किन अझै पनि परिवर्तन हुन सकेन नेपाली समाज ? के महिला हिंसा यसरी नै युगौं युग चलिरहन्छ त ? हो हामी यता तिर लागौं, सबैको ध्यान यता जान जरुरी छ ।
हाम्रो नेपालको समाज र संस्कृति कस्तो छ जरै देखि अध्ययन गरेर महिला हिंसाको पनि भेदहरुलाई पत्ता लगाएर प्रभावकारी माध्यमबाट चेतनाको मुश्लो झोस्न आवश्यक छ ।
वर्तमान नेपाली परिवेशलाई हेर्दा हरेक कुरामा महिला हिंसाको जड लुकेको पाइन्छ । पुरुषको सोचमा अनि महिलाको सोचमा, समाज अनि संस्कृतिमा ।
यसरी दिनानुदिन महिला हिंसा घटनाहरु बढिरहनुमा हाम्रो समाज दोषी छ समाजको आँखा दोषी छन् । संस्कृति दोषी छ , संस्कृतिको गहिराई दोषि छ ।
हजारौं राधाहरुले अझै कति सहने यो पिडा ? कहाँ छौं हामी ? कता पुगेको छ हाम्रो सोच ? के हो हाम्रो लक्ष्य ? कहाँ पुग्नुछ हामी ? जवकी २१ औं सताब्दीमा पनि हामी बोक्सीको नाममा घण्टौ कसैलाई दुव्र्यवहार गर्न सक्छौं । शिक्षा र चेतनाको यो भन्दा तल्लो स्तर सायदै कतै भेटिएला ।
बोक्सीको अन्धविश्वासमा महिला माथि हिंसा पटक पटक दोहोरीएको छ तर यसरी ६ घण्टासम्म निर्ममता पुर्वक प्रहार गरिरहदाँ चुपचाप हेर्न सक्ने मानव झुण्ड भने देखिएको थिएन् ।
के रामबहादुर चौधरी, किस्मती चौधरी, ममता प्रसाद चौधरी, प्रेम रोकाय दोषी छैनन् भनेर उन्मुक्ति पाउने ठाँउ छ ? फेरी किन अनुसन्धान या यो वा त्यो बाहाना जवकी भिडियो नै सामाजिक संजालमा सार्वजनिक भईसकेको छ ।
त्यसो त हरेक समस्याको जड राजनीति र पहँुच हुने गरेको छ । यति ठुलो अपराधको दोषीलाई रिहा गर्न दबाब दिने स्थानीय जनप्रतिधि, छोडिदिने प्रहरी प्रशासन कसरी चलेका छौं हामी, केमा आधारित छ हाम्रो शासन व्यवस्था भन्ने कुरा यहिबाट प्रष्ट हुन्छ । ।
विधिको शासनको यो भन्दा ठुलो उपहास के हुन सक्छ ? सम्पुर्ण मानव समुदायको विकास संरक्षण र नियन्त्रणको लागि सामाजिक र कानुनी न्यायको दुष्टिकोणले निर्मित विधीको शासनको अपहेलना गर्नु भनेकै गर्नु भनेकै मानवताको अपहेलना गर्नु हो, लोकतान्त्रिक समाजको अवधारणाको खिल्ली उडानु हो ।
अझ यसमा पनि जनताकै प्रतिनिधिको निर्लज्ज ब्यवहारबाट हामीले के बुझ्ने समाज कतातिर गहिरहेको छ ? अनि कहिलेसम्म अत्याचार सहनु पर्ने ? के यही कानुन प्रयाप्त छ ? कानुुनको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ ?
बोक्सी भन्दै कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ
सप्तरी। बोक्सी भन्दै कुटपिट गरेको आरोपमा घटनामा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । विष्णुपुर गाउँपालिका–३ बस्ने ५१ वर्षीया पारुल माली, सोही ठाउँकी ३३ वर्षीया अनुरागीदेवी मालिन र ३३ वर्षीया सुनितादेवी
इटहरी । सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम इनरुवासँग सीमा जोडिएको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको हरिनगरकी एक महिलाले छोरीलाई लोगेको रोग निको पार्न पूजापाठ गर्दा बोक्सी भन्दै कु्टपिट गर्ने गढी गाउँपालिका–४ का तीन जनालाई प्रहरीले
बोक्सीको आरोपमा कुटिएकी चौधरीलाई आर्थिक सहयोग
कैलाली । बोक्सी आरोपमा निर्घात कुटिएकी कैलालीे घोडाघोडी नगरपालिका–५ देउकलियाकी २० वर्षीया राधा चौधरीलाई रु ३६ हजार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएकोे छ । धनगढीमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशसभा सदस्य चुनकुमारी
बोक्सी आरोपमा कुटपिट गर्ने अपराधीलाई ८ वर्ष जेल हाल्छौं : मन्त्री थापा
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापाले कैलाली घोडाघोडीकी १८ वर्षीया राधा चौधरीलाई बोक्सी आरोपमा कुटपिट गर्नेहरूलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने र दोषीलाई ५ देखि ८ वर्षसम्म जेल